Afrika : Tsy Fandoavana Hetra, Tombony Ho an’ny Fampandrosoana Sa Ho an’ny Françafrique ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 6:19 GMT
Navoakan'ny Le Pangolin ny fantina iray avy ao anatin'ny Journal du Dimanche momba ny fepetra iray vaovao fampihenàna ny hetra aloan'ireo orinasa frantsay mampiasa vola any amin'ny tany andalampandrosoana, “indrindra fa ao Afrika”.
Araka io tsonga io, ny mety ho iray amin'ireo lalantsaina ao ambadik'ity fepetra vaovao ity dia ny fampiroboroboana bebe kokoa ny fampiasambolan'ny sehatra tsy miankina, ao anatin'ny fanantenanahoe hitondra vokatra izany fa tsy toy ireo fanampiana avy amin'ny fanjakàna izay tsy nahitana vokany hatreto.
Fepetra iray tohanan'ireo mpkambana maro avy amin'ny UMP io, antoko avy amin'ny hery ankavanana maro an'isa ao Frantsa, na dia niampanga azy io aza ny sosialista sasantsasany hoe endrika iray vaovaon'ny Françafrique.
Feno fisalasalàna i Musengeshi Katata, izay manoratra bilaogy ao amin'ny Le Pangolin. Fepetra vaovao antsoiny hoe “varavarana iray misokatra” amin'ireo orinasa frantsay sy ireo governemanta afrikàna mba hisolokiana ny vahoaka :
Izay naroson'i Lefevre dia zavatra efa fanao sy eken'ny rehetra any amin'ny tontolo manankarena sy mandroso ara-indostria. Ao Alemaina na ao Etazonia, io tsy fampandoavana hetra io mba ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana dia ahafahan'ireo tandrefana izay liana amin'izany, miaraka aminà fijanonana fotoana elaela ao Afrika sy fampanaovana sonia ireo teratany mpanao kolikoly, mahazo tombontsoa ara-bola goavana avy amin'ny tamberimbidin'izy ireo.
Manararaotra taneraka azy io ireo mpisehatra, fikambanana mpanao fanampiana, ary hatramin'ireo indostria mpanao hosoka ka mandefa fanafody efa niasa sy lany andro ho any Afrika, amin'ny filazàna fa mbola tsara sy feno izy ireny. Ny fiafaràny, mampanontany tena raha toa ka mbola tsy maintsy hanaiky foana ny ho voafitaka amin'ireo fitaovana tampimaso izay ny hany tanjony dia ny hamitaka sy handetika an'i Afrika ho ao anaty hadisoam-panantenana faran'izay lalina, ara-toekarena sy ara-bola.
Ry namana malala, raha toa ireo tandrefana ka maniry ny hampiasa vola marina aty Afrika, dia aoka izy ireo handeha ho any ary tena hanao marina toy izay nataony tao Shina: mamindra ny teknolojiany ho any sady mamokatra mba hanodrana ary mandoa ny hetra ho an'i Afrika. Minoa ahy, tsy tian-dry zalahy ireo ny hanao izany.
…Afrikàna isika, ekena, ary mahantra, saingy tsy adala! Tsy fahadiovam-po sy tsy mendrika no sady filalaovana olona ny fiezahana hamitaka ny vahoaka tahaka izany .